Nezvedu - Jinhua Ecubmaker Technology Co., Ltd.
Ngatiitei Cube Ireruke
Isu takarumbidzwa kuunza chaiyo 3D Printing tekinoroji iyo inogona kubatsira
mune ramangwana indasitiri uye kusangana nezvinodiwa nevatengi.
Iyo Inokura Kambani ine Mbiri Yakakwirira Kushanda neNew Technological Multi-chishandiso 3D mapurinda.
Inopfuura zviuru zvishanu zvemamirioni emakambani.Iye pamwedzi yekugadzira chinzvimbo inodarika mazana mashanu ezvidimbu 2 nyanzvi bvunzo mitsara
R & D Kubatsira
Vanopfuura makumi maviri nyanzvi R&D nhengo Kuwedzera kudyara mukutsvaga kwechigadzirwa uye kusimudzira.
Tine vechidiki vanoshingairira rutsigiro timu yeiyo chaiyo-nguva online rutsigiro Max 4 maawa 'anokurumidza kupindura mwero Vhidhiyo rutsigiro rwemhando dzese dzedambudziko mhinduro Yakakwira chiyero chepamhepo Tsigiro kubva kune varipo vashandisi.
Kune nzira dzakawanda dzekutibata nesu .Tinyorere chero chinhu maererano nechido chako. Tiri nguva dzose nemi kupa basa redu yakanakisisa. EcubMaker Inotenda mukugutsikana kwevatengi. Tipeiwo mukana wekukushandirai.
Titevere pane yedu Yemagariro Media kuti uwane patsva nezve Zvigadzirwa uye Zvitsva zvinopihwa.